प्रदेश-२ – Page2– Halkaro
प्रदेश २ मा बेग्लै प्रहरी
जनकपुर । प्रदेश २ ले आफ्नो प्रदेशका लागि बेग्लै प्रहरी भर्नासम्बन्धी कानूनको तयारी गरेको छ । प्रदेश २ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेका छन् । प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षाको विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने हुनाले प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी कानून […]
प्रहरी र भारतीय अपराधीबीच भिडन्त, एकको मृत्यु
रौतहट । जिल्लास्थित प्रहरी गस्ती टोली र भारतीय आपराधिक समूहबीच दोहोरो गोली हानाहान हुँदा एक भारतीय अपराधीको मृत्यु भएको छ । स्थानीय राजदेवी नगरपालिका वडा नं. ४ गडहिया डुमरिया नजिक बागमती नदीको बाँधमा गएराति ११ बजे प्रहरीटोली र भारतीय आपराधिक समूहबीच दोहोरो गोली हानाहान भएको हो । दोहोरो भिडन्तमा प्रहरीको गोली लागेर एकजना २५ वर्षीय […]
प्रदेशको नाम मधेस र भाषा हिन्दी राखे अान्दोलन
जनकपुर । प्रदेशसभा गठन भएको ६ महिना बितिसकेको छ। यद्पी प्रदेशको नामाकरण भने टुंगिन सकेको छैन्। प्रदेश २ को नामाकरणको विषयमा चर्को विवाद देखिएको छ। नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नामाकरण तत्काल टंग्याउन माग गरेको छ। नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले प्रदेश २ को नामकरण र सरकारी कामकाजको भाषा अविलम्ब टुंगो लगाउन माग गरेका हुन्। […]
राजपाले प्रदेश २ मा फोरम सरकारलार्इ दिएको समर्थन फिर्ता लिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका महासचिव एवं प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनले प्रदेश २ को फोरम नेतृत्वको सरकारबाट आफ्नो पार्टी फिर्ता हुने स्पष्ट पारेका छन् । राजधानीमा बुधबार आयोजित साक्षात्कारमा बोल्दै नेता सुमनले मधेस आन्दोलनको भावनाविपरीत उपेन्द्र यादव सरकारमा गएको आरोप लगाए । नेकपा र फोरम नेपालबीच भएको दुई बुँदे सहमति सत्तामा चढ्ने सिँढी मात्रै […]
प्रदेश २ मा बदलिँदै सत्ता समिकरण, राजपा अाउट हुँदै नेकपा इन
काठमाडौँ । प्रदेश २ का सत्तारूढ दल संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबीच दुरी बढ्दै गएको छ। यो सँगै प्रदेश २ मा सत्ता समिकरणमा फेरवदल हुने देखिएको छ । केन्द्रमा फोरम सरकारमा सामेल हुने र प्रदेशमा राजपालार्इ हटाएर फोरम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको गठबन्धन बन्ने संकेत देखिएको छ । यद्पी नेकपाले प्रदेशमा सरकारलार्इ दिएको […]
चितवन । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको स्वागतमा प्रदेश २ का मूख्य मन्त्री लालबाबु राउतले बोलेको कुरा देशभक्तीपूर्ण र जायज भएको बताउनुभएको छ । आज भरतपुरमा संचारकर्मीहरुसंग कुरागर्दै यादवले प्रदेश २ का मूख्य मन्त्री राउतले भारतिय प्रधानमन्त्रीलाई नरेन्द्र मोदीलाई सुनाउन नभई राष्ट्रिय एकतालाई मजबुद बनाउने र प्रदेश नम्बर २ […]
मोदीले गरे प्रदेश २ लाई एक अर्बको सहयोग घोषणा
धनुषा । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले प्रदेश २ को विकासका लागि भारत सरकारको तर्फबाट एक अर्ब बराबरको सहयोगको घोषणा गरेका छन्। नागरिक अभिनन्दन कार्यक्रममा उनले जनकपुर र आसपासका क्षेत्रको विकासका लागि १०० करोड सहायता दिने घोषणा गरेका हुन्। उनले प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर परियोजना छनोट गर्ने समेत बताए। उनले भने, “यो १०० करोड […]
जनकपुरमा मोदीलाई १२१ किलोका तीन माला, जनकपुर नगरको साँचो हस्तान्तरण
धनुषा । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई जनकपुरमा १२१ किलोका तीन वटा मालाको सम्मान दिइएको छ । उनलाई नागरिक अभिनन्दनका क्रममा प्रदेश नं. २ का सरकार, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघले १२१ किलोका छु्ट्टाछुट्टै माला लगाएर सम्मान दिएका हुन् । मोदीलाई जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दन पनि गरिएको छ । आज जनकपुरको रंगभूमि मैदानमा […]
जनकपुर । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आज नेपाल भ्रमणमा अाँउद्ै छन्। भारतको विहार राज्यको पटना हुँदै जनकपुर प्रवेश गर्ने मोदीको स्वागतका लागि जनकपुर तयार भएर बसेको छ । मोदीको जनकपुरधाम भ्रमणलाई दृष्टिगत गरी प्रदेश २ सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ । जनकपुरबाट काठमाडौं हुँदै मुक्तिनाथ गएर मोदी शनिबार दिउँसो ४ बजे स्वदेश फर्किने कार्यक्रम […]